scheduleबिहिवार माघ ९ गते, २०७६
ढाका, १ साउन । दक्षिणी एसियाका करिब साठी लाख नागरिकलाई बाढीको खतरा रहेको पाइएको छ । मनसुनी वर्षा र यसका कारणले पछिल्ला केही दिनमा आएको बाढीले गर्दा लाखौँ व्यक्ति प्रभावित पनि भइरहेको तथा अरु पनि कम्तीमा ६० लाख नागरिकलाई भारी वर्षाका कारण खतरा रहेको बताइएको हो ।
केही दिनयता दक्षिण एसियाका प्रायः देशहरुमा भिषण बाढी आएको छ । प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार भारतको कुनै एउटा राज्यमा मात्र दश लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् । त्यहाँको सरकारले रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेको छ । त्यस्तै यहाँका अरु पनि केही राज्यमा बाढीको प्रकोप देखिएको छ ।
त्यसैगरी बंगलादेश र नेपालमा पनि बाढीका कारण कैयौँ नागरिकको ज्यान गएको छ भने लाखौँ व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । ती देशमा पनि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले उद्धार कार्य गरिरहेको छ । आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्नलगायतका सहयोग सो समितिले ती देशमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
रेडक्रसका अनुसार बाढी आउने क्रम बढ्दो रुपमा रहेको छ र यसबाट अझै पनि कैयौँ नागरिक विस्थापित हुने र क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक जेभियर क्यासलेनोसले भने– बाढीको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, विस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि प्रतिदिन बढिरहेको छ । उनले बाढीका कारण मृत्यु हुने नागरिकको संख्या पनि प्रतिदिन बढ्दो रुपमा रहेको जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
यही हिसाबले अरु केही दिनसम्म बाढीको प्रकोप बढ्दै जाने हो भने दक्षिण एसियाली देशका कम्तमिा पनि ६० लाख नागरिकलाई यस प्रकोपले क्षति पु-याउन सक्ने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए ।
अहिले आफूहरु आपतकालीन व्यवस्थापनमा जुटिरहेको जानकारी उनले दिए । उनले भने– बाढीले निम्त्याएको संकटको समाधानका लागि कार्यरत छौँ तर मनसुन भर्खरै सुरु भएकोले यसले अझै पनि ठूलो क्षति पु-याउन सक्ने खतरा रहेको छ ।
भारतीय राज्य आसाममा मात्र दश लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् । यहाँ ब्रम्हपुत्र नदी बस्तीमा पस्दा यसले कम्तीमा पनि ७५० गाउँ नै बगाएको छ । त्यसैगरी नेपालको पनि दक्षिणपूर्वी भूभागमा बाढीले क्षति पु(याएको छ । यहाँ बाढीका कारण दर्जनौँ नागरिकको ज्यान गएको छ ।
उता बङ्गलादेशमा पनि बाढीले ठूलो असर पुर्‍याएको छ । जसका कारण यहाँका करिब १४ हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । यहाँ बाढीले ११ हजार भन्दा बढी घर बगाएको छ । भारी वर्षा र यसका कारण बाढी आउने क्रम जारी नै रहेको बताइएको छ । रासस/सिन्ह्वा
महासचिव गुटेर्रेसद्वारा चिनियाँ नयाँ वर्षको शुभकामना
अमेरिका हिँडेका २,००० भन्दा बढी व्यक्ति मेक्सिकोमा पक्राउ
कुद्स फोर्सका नयाँ कमाण्डरको हालत पनि सुलेमानीको जस्तै बनाइदिन्छौंः हुक
अष्ट्रेलियामा डढेलो निभाउन गएको एयर ट्याङ्कर दुर्घटना
भनाभनपछि गोली चल्दा १ जनाको मृत्यु, ५ जना घाइते
चिनी कुटनीतिः पाम तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतलाई मनाउँदै मलेसिया
सिनेटले ट्रम्पलाई निर्दोष ठहर गरे अमेरिकी प्रतिष्ठामा हानि पुग्ने डेमोक्र्याटको चेतावनी
मृत अवस्थामा फेला परेका आठ जना भारतीयको शव भारत लैजाने तयारी
पाकिस्तान आउलान् त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ?
सीएएमाथि तत्काल रोक लगाउन भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार
एटलास साइकल कम्पनीकी मालिक नताशा कपूरद्वारा आत्महत्या
डढेलो, बाढी र हूरीपछि अष्ट्रेलियामा विषालु माकुराको त्रास
न्यायाधीश एकातेरिनी ग्रीसको पहिलो महिला राष्ट्रपति
कति धनी छन् केजरीवाल? यस्तो छ उनको सम्पत्ति विवरण
बर्लिन सम्मेलनको सुरक्षा परिषदद्वारा स्वागत
साउदी राजकुमारमाथि संसारकै धनी बेजोसको फोन ह्याक गरेको आरोप
चीनमा कोरोनाभाइरसको त्रास, मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो
ट्रम्पले इमरान खानलाई भने- तपाईं असल मित्र हो
सुरु भयो अमेरिकी सिनेटमा ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको सुनुवाइ, नेताहरुबीच विवाद
प्रचण्डले नेकपामा बोलाएपछि बाबुरामको जवाफ- खड्गप्रसादको पिंजडामा नबोलाउनुस्
काठमाडौं, ९ माघ । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपामा आउन आह्वान...
एजेन्सी, ९ माघ । अष्ट्रेलियामा आगो निभाउन गएको जहाज (एयर ट्याङ्कर) दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी ३ जनाले ज्यान गुमाएको बिबिसीले...
म्यानचेस्टर युनाइटेड आफ्नै घरेलु मैदानमा पराजित
काठमाडौँ, ९ माघ । गएराति भएको प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड वर्नलीसँग आफ्नै घरेलु मैदानमा २–० गोलले पराजित भएको छ...
सभामुख पदमा उम्मेद्वारी दिएका सापकोटाविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन
फाइल फोटो काठमाडौँ, ८ माघ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेद्वारी दिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध...
एकतामा आउन बाबुराम र उपेन्द्रलाई प्रचण्डको निम्तो, भन्छन्- अलग चुलो नबाल्नुस्
काठमाडौं, ८ माघ । सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डा.बाबुराम...
आकाशमा एक्कासी यस्तो चीज देखिएपछि मानिसहरू त्रसित
एजेन्सी, ८ माघ । पाकिस्तानको लाहौर शहरको आकाशमा एउटा कालो रंगको वृत्ता देखिएको छ । उक्त वृत्तले मानिसहरूलाई कौतुहल र तरंगित...
एजेन्सी, ८ माघ । चर्चित साइकल कम्पनी एटलासकी मालिक नताशा कपूरले आत्महत्या गरेकी छन् । नताशाले बुधबार आत्महत्या गरेको भारतीय...
एजेन्सी, ९ माघ । अमेरिकाको शियाटलमा गोली चलेको छ । गोली लागी कम्तिमा पनि १ जनाको ज्यान गएको र ५ जना घाइते भएको रोइटर्सले जनाएको...